रक्सीले लठ्ठ पूर्वयुवराज पारस शाहले प्रहरी थर्काउदै ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार रक्सीले लठ्ठ पूर्वयुवराज पारस शाहले प्रहरी थर्काउदै !
रक्सीले लठ्ठ पूर्वयुवराज पारस शाहले प्रहरी थर्काउदै !
१६ श्रावण २०७८, शनिबार १०:१३
शुक्रबार ७ बजे साँझ चक्रपथ महाराजगञ्जस्थित नारायणगोपाल चोकमा रक्सिले मातेको ती पुरुष थिए, पूर्वयुवराज पारस शाह । रक्सी खाएर चोकमा प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेका उनी हेलमेट नलागाई बाई बत्ताइरहेको अवस्थामा शुक्रबार साँझ नारायणगोपाल चोकमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
एक जना रक्सीले लठ्ठ पुरुष प्रहरीलाई ‘तँ को हो मलाई चिनेको छस् ?’ भन्दै धाक दिएको देखिन्थ्यो । प्रहरीले ‘हिँड्’ भनेर घिर्सान खोज्दा उनी ‘जान्न, जान्न’ भनेर प्रहरीलाई उल्टै थर्काऊठे । भिडियोमा हेर्दा उनले प्रहरीले धम्क्याएका छन् । जाम भएपछि घेरिएको भीडमा पारस र प्रहरी छन् । प्रहरीले मातेर होसविना बोल्ने पारसलाई चौँकी लैजान बोलाउन भ्यान मगाउँछन् ।
पारस भने मेरो बाइक खैँ भन्दै बाइकको सोधपुछ गर्छन् । यत्तिकै केही युवकहरु देखिन्छन् । जो पारसका समर्थक जस्ता देखिन्छन् भिडियो हेर्दा त्यसपछि उनीहरुकै सक्रियतामा पारस बाइकमा चढ्छन् ।
समर्थकले सेल्फी खिचेको भिडियोमा देखिन्छ । प्रहरी भने उक्त दृश्यलाई केही गर्न सक्दैनन् । न भ्यान आउँछ, पारस समर्थकसँगै सेल्फी खिचेर हुँइकिन्छन् । पारसकै ठाउँमा अरु सामान्य मानिस भइदिएको भए उनीमाथि कडा कारबाही हुन्थ्यो ।सञ्चारकर्मी गणेश बुढाको फेसबुकबाट भिडियो लिइएको हो। News24Nepal.tv
Previous article‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्न सीसीएमसीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस
Next articleदी भ्वाइस अफ नेपालमा अन्तिम चारः को-को छानिए ?